0 Thursday August 27, 2020 - 11:21:21
Habeenkii xalay dagaalyahannada Xarakada Al-Shabaab waxay weeraro kala duwan ku qaadeen fariisimiyaal ciidamada Dowladda Federaalka iyo kuwa Shisheeyaha ee ku sugan degmooyin katirsan gobollada Shabeellaha Hoose iyo Jubbooyinka.
0 Thursday August 20, 2020 - 06:38:23
0 Sunday August 09, 2020 - 16:23:54
0 Sunday August 09, 2020 - 09:29:46
Maxbuuskii ugu dambeeyay oo katirsanaa ciidamada imaarada islaamiga Afghanistan ayaa lagasii daayay xabsiyada cadowga ee ku kala firirsan daafaha wadankaasi.
0 Saturday August 08, 2020 - 16:42:35
Tobanaan katirsan ciidamada dowladda Nigeria ayaa ku dhintay weerar aad u xooganaa oo dagaalyahanno katirsan Al Qaacidda ay ka fuliyeen Koonfurta wadankaas.
0 Saturday August 08, 2020 - 16:34:09
inkastoo maamulka daaquuqdka aala sacuud uu wax walba oo xumaan ah usameeyay sidii uu raalligelin lahaa dowladaha reergalbeedka gaar ahaan mareykanka hadane taas kama dhigin in uu aamin ka noqdo cadaadisyada uga imaanaya gaalada ay shurakada ku noqdeen ladagaallanka muslimiinta.
0 Thursday August 06, 2020 - 11:21:31
Maamulayaasha wadanka Lubnaan ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagusoo rogay magaalada caasimadda ah ee Beyruut.
0 Visits: 1791 | Tuesday August 04, 2020 - 14:43:44
0 Sunday August 02, 2020 - 13:31:48
Roobab mahiigaan ah oo daad wata ayaa musiibo daran ka geystay wadanka Suudaan ee dhaca bariga qaaradda Afrika.
0 Sunday August 02, 2020 - 12:30:14
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada hoose ayaa sheegaya in markale weerar culus lagu qaaday qaar kamid ah saldhigyada ciidamada gummeysiga Kenya.
0 Saturday August 01, 2020 - 11:36:17
Bayaan rasmi ah oo ay faafisay mu'asasada Azzalaaqah oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada Nusratul Islaami walmuslimiin ee ka jihaadda galbeedka Afrika ayay ku sheegatay mas'uuliyadda weeraro lagu beegsaday ciidamada Faransiiska.
0 Thursday July 30, 2020 - 14:17:50
Booliska dowladda Pakistan ayaa xaqiijisay in wadankaas lagu dilay nin gaal ah oo nabanimo sheegtay.
0 Wednesday July 29, 2020 - 08:38:14
Hoggaamiyaha dowladda dabadhilifka Masar ayaa si dabacsan uga hadlay khilaafka kala dhaxeeya Itoobiya ee ku aaddan biya xireenka Al Nahda ee dhismihiisu ka socdo hareeraha wabiga Niil.
0 Wednesday July 29, 2020 - 07:44:04
0 Sunday July 26, 2020 - 08:25:42
labataameeyo qof oo shacab ah ayaa lagu dilay weerar cusub oo ka dhacay gobolka Daarfoor ee dhaca galbeedka wadanka Suudaan taas oo ka dhigan in dhimashadii ugu badneed oo ka dhacda gobolkan muddo sanada ah.
0 Thursday July 23, 2020 - 12:22:34
0 Wednesday July 22, 2020 - 09:10:14
Melleteriga dowladda Uganda ayaa gelinkii dambe ee maalintii Talaadada ku dhawaaqay in diyaarado dagaal uu uga qeyb qaadan doono duullaanka ay shisheeyuhu ku qaadeen dalka Soomaaliya halkaas oo lagu miciya siibay kumanaan ciidamo jinsiyado kala duwan leh.
0 Tuesday July 21, 2020 - 20:43:40
Musiibo hor leh ayaa ku habsatay dadka American-ka ah kadib markii uu si aan hore loo arag ugu laba kacleeyay caabuqa Covid19.
0 Tuesday July 21, 2020 - 08:16:06
Hoggaamiyaasha kacdoonka wadanka Maali ayaa sheegay in ay iska diideen dalab uga yimid waxa loogu yeero beesha caalamka iyo xukuumadda Maali ka jirta oo ahaa in ay kacdoonka joojiyaan ayna aqbalaa ka qeyb qaadashada xukuumad cusub oo lasoo dhisi doono.
0 Sunday July 19, 2020 - 16:30:34
0 Wednesday July 15, 2020 - 11:53:56
Dagaallo khasaara badan dhaliyay ayaa ka bilaawday xuduudda ay wadaagaan wadanka Azerbaijan iyo Armenia.
0 Tuesday July 14, 2020 - 12:09:58
Gole baarlamaan oo taabacsan dagaal ooge khaliifa Xaftar islamarkaana ku sugan bariga Libiya ayaa soo saaray bayaan ay sharci uga dhigayaan in melleteriga dowladda Masar ay duullaan melleteri kusoo qaadi karaan wadankaasi.
0 Thursday July 09, 2020 - 08:01:02
Warbixin cusub oo uu soo saaray machadka caalamiga ah ee (Cable) oo ka faallooda arrimaha Tiknoolajiyada ayaa lagusoo bandhigay wadamada ugu qaalisan qiimaha Internetka iyo kuwa ugu rakhiisan.
0 Thursday July 09, 2020 - 07:11:56
Waxaa si lama filaan ah u geeriyooday R/wasaarihii dowladda Ivory Coast ama Saaxilul Caaj oo ah dal dhaca galbeedka qaaradda Afrika.
« Prev1234567 ... 44Next »